Kaalintee ayuu Aaron Wan-Bissaka ka galay xiddigaha ugu qaalisan taariikhda kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 30 Juunyo 2019. Manchester United ayaa si rasmi ah shalay u dhameystirtay saxiixa xiddiga garabka midig ee Aaron Wan-Bissaka, kaasoo kaga yimid dhanka kooxda Crystal Palace.
Aaron Wan-Bissaka ayaa saxiixay heshiis shan sanadood ah, wuxuuna dooq u heysataa inuu sanad kale ku dari karo qandaraaskiisa.
Manchester United ayaa xiddigan kaga soo qaadatay kooxda Crystal Palace adduun dhan 50 milyan oo gini, waxaana uu noqonayaa daafaca garabka midig ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta adduunka.
Yeelkadeeda, Dhameystirka saxiixa Aaron Wan-Bissaka ee Man United ayaa ka dhigan inuu yahay laacibkii labaad ee ay Red Devils la soo wareegto illaa iyo haatan suuqan kala iibsiga ee xagaagan, kaddib markii ay kooxda Swansea City kala soo wareegeen Daniel James.
Haddaba kaalintee ayuu Aaron Wan-Bissaka ka galay xiddigaha ugu qaalisan taariikhda kooxda Manchester United?
Aaron Wan-Bissaka ayaa noqday ciyaaryahanka afaraad ee ugu qaalisan ama ugu qiimaha sarreeya haatan kooxda Manchester United.
Kaddib markii ay Man United ku soo qaadatay 50 milyan oo gini waxa uu booska kala baxay xiddiga reer Brazil ee Fred kaasoo ay kooxdu kula soo wareegtay 2018-kii adduun dhan 47 milyan oo gini.
Difaacan reer England ee Wan-Bissaka waxaa kaliya ka qaalisan marka loo eego kooxda Manchester United saddexda ciyaaryahan ee Pogba, Lukaku iyo Di Maria.
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa ah iminka laacibka ugu qaalisan kooxda Manchester United kaddib markii ay 2016-kii kaga soo qaadatay Juventus adduun dhan 89 milyan oo gini.
Ciyaaryahanka kaalinta labaad ku jira xiddiga ugu qaalisan kooxda ka arrimisa garoonka Old Traffarod waa laacibka reer Belgium ee Romelu Lukaku ay sanadkii 2017-kii Everton kaga soo iibsadeen 75 milyan oo gini.
Laacibka saddexaad waa Angel Di Maria oo ay kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ay kula soo wareegtay adduun dhan 59.7 milyan oo gini.
Aaron Wan-Bissaka ayaana ah laacibka afaraad ee ugu qaalisan kooxda Man United kaddib markii ay kula soo wareegtay 50 milyan oo gini, waxaana kaalinta shanaad ka soo muuqday Fred oo ay Man Utd sanadkii hore ku soo qaadatay 47 milyan oo gini.